Trondro maloto Eny Ivato, Ambohibao, Ambohimanarina no hamarotana azy
CNaPS Vontovorona Olona araha-maso miisa 67 no mihiboka eny
Anisan’ny toerana hametrahana ireo olona araha-maso ara-pahasalamana akaiky amin’izao fisian’ny valan’aretina Coronavirus eto Madagasikara izao ny eny amin’ny fotodrafitrasan’ny
Tsena an-davanandro Midangana izay tsy izy ny vidin’ny legioma
Midangana izaitsizy ny vidin’ny legioma eny an-tsena. 1.000 Ar isan-kilao ny fiarakany raha kely ka tena mampikolay ny isan-tokantrano tokoa .
Fonjan’antanimora Olona 2 no nahiana ho voan’ny Coronavirus
Tsy misy olona voan’ny coronavirus ao amin’ny fonjaben’Antanimora hoy ny Ministry ny Ati-tany Tianarivelo Razafimahefa omaly.
Fizarana zavatra avy amin’ny fanjakana Tsy handray anjara ny Depiote TIM
Nanapa-kevitra ny tsy hiditra amin'izay mety ho fizarana zavatra na vola avy amin'ny mpanatanteraka ireo solombavam-bahoaka TIM.
Ady amin’ny tsy fanjariantsakafo Azo ampiasaina ny vokatry ny tany eto amintsika
Rehefa nahazo ny amboara tompondakan’ny ady amin’ny tsy fanjariantsakafo ny filoha Andry Rajoelina, nandritra ny fihaonana an-tampony faha-33-n’ireo
Editions Jeunes Malgaches Hamporisika ny ankizy ho tia mamaky boky
Hisy boky miisa 6 izay navadika ho feo handeha maimaimpoana isan'andro ao amin'ireo onjam-peo mandrafitra ny “Coalition des radios”, izay maherin` ny 50 isa,
Lehilahy roa avy nanarato trondro maloto tao amin'ny ranon'ny Marais Masay no tratran'ny polisin’ny boriborintany fahenina omaly alarobia 26 febroary.
Ny alatsinainy 24 febroary lasa teo no nahazo fitarainana avy amin'ny fokontany Avaratetezana, Ampefiloha Ankeniheny ary Ampandriambehivavy ny polisy avy ao Ambohimanarina fa misy andian'olona lahy sy vavy manarato sy manihaka trondro maloto ao amin'ny ranon'i Masay, Anosy ary Behoririka ary mivarotra izany eny amin'ny tsenan’Ambohimanarina, Talatamaty, Ambohibao ary Ivato. Isaky ny maraina manomboka amin'ny 4 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora maraina no fanaovan'ireo olon-dratsy ireo ny asa ratsiny. Gony sy koveta be no hitondran'izy ireo ireo trondro azony ary entiny amin'ny taksibe 114 sy 194 mamonjy ireo toerana hivarotana azy. Nanoloana izany dia nanantanteraka "barrage routière" ny teto anivon'ny polisy hisavana ireo fiara fitaterana mitondra ireo mpaka sy mpivarotra trondro maloto ireo. Ny marainan'ny omaly alarobia 25 febroary tokony ho tamin'ny 5 ora sy sasany, lehilahy roa avy naka trondro maloto tao amin'ny ranon'i Masay no tra-tehaky ny polisy tao anaty taksibe iray rehefa saika handeha hivarotra izany. Mbola nahitana trondro maloto milanja 15 kilao izy ireo ary harona misy ny fitaovana fandratoana trondro. Rehefa natao fanadiadihana dia niaiky izy ireo fa trondro tao amin'ny ranon'i Masay ireo tratra ireo. Natolotra ny fitsarana omaly izy roalahy.
Miteraka fanapiozinana ara-tsakafo , mankarary kibo sy tsinay ary mety tena hahafaty mihitsy ny fihinanana trondro maloto. Izany hoe azo raisina ho mpamono olona tsotra izao ny manarato sy mitsinjara ary mivarotra azy ireny. Izy roalahy ireto aloha no tratra, saingy mety maro no mbola miasa am-pilaminana any ho any; sao dia tokony hasiana “Brigade anti-trondro” maloto hanara-maso tsy an-kiato ireo lakandrano sy farihy eto an-drenivohitra ?